Ithuluzi Lokumaketha Elikhulu Kunazo Zonke! | Martech Zone
Cha, angizukuveza ubuchwepheshe obusha nobuhle obusha futhi obumangalisayo, iwebhusayithi, noma enye inhlamvu yesiliva yokumaketha ezokwenza inkampani yakho inyakaze ibe yisithunzi esikhulu.
Ngikhuluma ngalokhu inkonzo enhle yamakhasimende. Kubonakala kusobala ukusho lokho. Wonke umuntu uyazi ukuthi insizakalo enkulu yamakhasimende iyindlela efakazelwe yokukhulisa ibhizinisi lakho, kepha kulokhu engikubonile, izinkampani eziningi sezikukhohliwe. Uma bengakukhohlwanga, okungenani balahlekelwa yithuba lokunika amandla amazwi amakhasimende abo ajabule ukukhulisa ibhizinisi labo.
Wonke umuntu unendaba yakhe eyethusayo mayelana nensizakalo yamakhasimende futhi wonke umuntu unendaba yakhe yensizakalo enkulu yamakhasimende. Njengabamakethi, sidinga ukukhumbula ukuthi lezi zindaba zikhulunywa nsuku zonke kulabo abazoba amakhasimende namakhasimende. Futhi manje - imithombo yezokuxhumana izikhulisile lezi zingxoxo!
Isevisi yamakhasimende inamandla okusika zombili izindlela. Leyo ndaba embi inamandla okuthumela amathemba amasha namakhasimende akhona kubancintisana nabo. Leyo ndaba enhle ingaletha amakhasimende amasha nokwenyuka kokuthengisa. Kungumsebenzi wakho ukwenza ngcono ukuthengwa kwamakhasimende ukuthulisa okubi, futhi unikeze nge-bullhorn ukukhulisa okuhle!
Ngakho-ke siqinisekisa kanjani ukuthi le ndaba iyakhulunywa? Muva nje, sengibonile izindlela ezingabizi, nezisebenzayo zokuqinisekisa ukuthi indaba iyatshelwa. Enye inkampani engiyaziyo ivumela amakhasimende ukuthi abhale futhi athumele izindaba zawo kubhulogi yenkampani futhi ahlanganyele ngawo nanoma ngubani othanda ukufunda.
Ezinye izinkampani seziqale amanethiwekhi wamakhasimende ku- Ingxenyekazi yeNing. Basebenzisa lawa manethiwekhi njengesisekelo solwazi, iforamu, ideski losizo nesiza sobufakazi konke kukukodwa. Kuyindlela enhle yokuhlanganisa ulwazi lwamakhasimende bese upenda indaba eyiqiniso yenkonzo yamakhasimende enhle yenkampani yakho.
Ngakho-ke wenzani ukuqinisekisa ukuthi amathemba akho ezwa ngenkonzo yakho enkulu yamakhasimende?
Nov 11, 2009 ngo-2: 15 PM
Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Ngikholwa ukuthi indlovu esegumbini nganoma iyiphi ingxoxo yezobuchwepheshe izohlala ingakhohlwa ngabantu ofuna ukusebenzisa ubuchwepheshe bakho. Uma ukhohlwa ngabantu ngakho-ke bonke ubuchwepheshe obukhulu emhlabeni abukwazi ukwenza umbono wakho ube nenzuzo noma uzuze.
Nov 14, 2009 ngo-7: 40 PM
Julie, Ngiyabonga! Ngiyavuma, ubuchwepheshe buhle kuphela njengalowo obusebenzisayo.
Nov 11, 2009 ngo-7: 01 PM
Lokhu akukwazi ukushiwo ngokwanele. Futhi izinkampani * namanje * azibonakali zikuthola. Lokhu yinto esiqala ukukhuluma ngayo kakhulu kubhulogi yethu, futhi sizobe simba ngokujula ukuthi izinkampani zingahamba kanjani kusuka ekumaketheni imidiya yezenhlalo ziye ekuhlinzekweni kwamakhasimende ezokuxhumana nabantu, kepha ngicabanga ukuthi isinyathelo sokuqala ukukhumbuza izinkampani nje leyo nsizakalo yamakhasimende iyithuluzi lokumaketha elihle kunawo wonke laphaya.
Nov 12, 2009 ngo-2: 07 PM
Ngiqaphele ukuthi izinkampani ezikhathalela ngempela ukwenzelwa kwamakhasimende seziqalile ukusebenzisa imithombo yezokuxhumana ngempumelelo. Ukusuka ekubalweni kumasayithi wokubuyekeza ekuphenduleni imibuzo amakhasimende angaba nayo, futhi avume esidlangalaleni izikhalazo zomkhiqizo nezixazululo zazo. Kuyavunywa, kunendlela ende okufanele ihanjwe ngaphambi kokuba isabalale.
Nov 12, 2009 ngo-11: 00 PM
Usho kahle u-Adam. Isondo alivuselelwa kabusha, lisalolongwa nje ukuze kube lula ukuhamba. –UPawulu
Nov 14, 2009 ngo-7: 38 PM
Nov 15, 2009 ngo-3: 04 AM
Ukuhlinzekelwa kwamakhasimende kungenye yalezo zinto ezihlale zithandwa futhi zibaluleka kakhulu. Kodwa-ke ngithanda ukubabona bephenywa. Ukuba nedumela elihle lenkonzo yamakhasimende kunika izinkampani inkululeko lapho zishibilika. Kepha bathole leyo latitude.
Ezinye izinkampani zibonakala zikhululekile ekusebenzeni kwamakhasimende ngoba azikwazi ukulawula ngqo. Kodwa-ke uqinisile uma uthi iyithuluzi lokumaketha elikhulu kunawo wonke ake aba, ikakhulukazi uma ubamba igama lomlomo elifiselekayo.
Jan 18, 2010 ngo-6: 46 PM
Yize kubonakala sengathi kufanele kube sobala ukuthi kufanele ube nesevisi enhle yamakhasimende, ngokusobala akunjalo, ukwahlulela ngokuthi zimbalwa kanjani izinkampani ezinensizakalo enhle.
UTom - Abalingani Bamehlo